Biden oo sheegay in Maraykanka difaaci doono Taiwan hadii China ay weerarto - Horseed Media
Biden oo sheegay in Maraykanka difaaci doono Taiwan hadii China ay weerarto
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo ka qeyb qaadanayey kulan su’aalo ay shacabka weydiinayeen ayaa sheegay in dowlada Maraykanka ay difaaci doonto dowlada Taiwan oo xiligan cadaadis xoogan kala kulmeysa China.
Maraykanka iyo Taiwan ayaa xiriir dheer iyo iskaashi militari ka dhaxeeyaa, balse waa markii ugu horeysay oo uu Maraykanka sheego inuu si toos ah dagaalka u geli doono hadii China duulaan ku qaado jasiirada Taiwan oo ay xukuumada China u aqoonsan tahay qeyb kamid ah dhulweynaha Shiinaha.
China ayaa bishan dardar gelisay dhoolatuska ciidamada oo ay ka wado Badda iyo hawada Taiwan, sidoo kale Wasiirka Difaaca ee Taiwan ayaa sheegay in qorshaha China uu yahay inay duulaan ku qabsato jasiirada Taiwan inta aan la gaarin sanadka 2025.
Maraykanka oo hub iyo taageero militari siin jiray Taiwan ayaa horey uga gaabsan jiray inay si toos ah ugeli doonaan dagaalka hadii China ay weerarto Taiwan, hadalkan Biden ayaa ah mid guux weyn abuuray.
Hase yeeshee qoraal goor danbe kasoo baxay Xafiiska Madaxtooyada Maraykanka ee Aqalka Cad ayaa lagu sheegay inaan waxna laga bedalin siyaasadii hore ee Maraykanka ee arrimaha Taiwan, arrintaasi oo u muuqata mid lagu qaboojinayo xiisada ka dhalan karta hadalada Madaxweyne Biden.
MW Xasan Sheekh oo la kulmay Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada dalka￼
Xasan Sheekh iyo Farmaajo oo ku kulmay xarunta Madaxtooyada ee Villa Somalia
QM & Mareykanka oo soo dhoweeyey doorashadii Madaxweynaha cusub ee JFS
Turkiga muxuu ka yiri doorashadii Xasan Sheekh?
Garoonka diyaaradaha ee Sanca oo dib loo furay muddo sanado ah ka dib
MW Xasan Sheekh oo kulamo kala duwan ka wada Muqdisho